21-06-18 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ထုလုပ်ခြင်း သည် အရည်ကျိုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပျော့ပျောင်းသော သွန်းလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သေးငယ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော သတ္တုသွယ်တန်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အတုပြုလုပ်ခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် တူညီသောပစ္စည်းများ၏ သွန်းလုပ်ခြင်းထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ဘို့ ...
ပြုပြင်ထားသော ကားအနားကွပ်များနှင့် အချက်အချာကျသော ဂက်စ်များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
ပြုပြင်ထားသော ကားအနားကွပ်များနှင့် အချက်အချာကျသော ဂက်စ်များ ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကား အဘယ်နည်း။1. မူလဘီးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုပြင်ထားတဲ့ဘီးပဲဖြစ်ဖြစ် ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘီးနဲ့တာယာက ကားရဲ့အကာအရံနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ဤနေရာတွင် ကိုက်ညီခြင်းဆိုသည်မှာ ဘီးဗဟိုချက်အနည်းအများပေါ်မူတည်၍ ...
အတုလုပ်ပြီးနောက် ဘီးအတုများ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ
ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် အပူပေးခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။ဘီးပုံသွင်းခြင်းများသည် ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဘီးပေါက်ခြင်း၏အရွယ်အစားကြောင့် မတူညီသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုပြသသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။1. အဖွဲ့အစည်း အဆင့်အတန်း...